Umbuzo wokuqala: Singakanani isikhathi esidingekayo ukugeza amabhodlela ngosuku olulodwa locwaningo lwesayensi? Umngani 1: Ngenze ukushisa okuphezulu kwe-organic liquid phase synthesis cishe unyaka owodwa nohhafu, futhi kuthatha cishe ihora elilodwa ukugeza amabhodlela nsuku zonke, okwenza u-5-10% wocwaningo lwesayensi ...
Okhilimu abenza mhlophe, izifihla-buso zobuso, okokugcoba ukunakekelwa kwesikhumba, odayi bezinwele… Kulezi zinsuku, kunezinhlobonhlobo zemikhiqizo yezimonyo emakethe futhi zivela ngokungapheli, ezithandwa kakhulu ngabathandi bobuhle. Kodwa-ke, izimonyo zisetshenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba nokwenza ubuhle besikhumba futhi ...
Indlu yokuhlanza indlu ayinakusetshenziswa elabhoratri
Uyikhetha kanjani okokuhlanza okokuzenzakalela ngama-glassware washers? Amalabhorethri amaningi anemishini eminingi yokuhlola esezingeni eliphakeme athole ukuthi okokuhlanza indlu kusetshenziselwa ukuhlanza izinsimbi ze-glassware ezibucayi. Kuvame kakhulu ukulungisa i-asidi yakho noma usebenzise i-aci engaqinisekisiwe ...
Into ekuyo yonke indawo elabhoratri yizitsha ezahlukahlukene zokuhlola. Amabhodlela namakani, imininingwane ehlukile, kanye nokusetshenziswa okwehlukile kuvame ukwenza abasebenzi bokuhlanza balahlekelwe. Ikakhulukazi ukuhlanzwa kwamapayipi kanye namashubhu okuhlola kuma-glassware kuhlala kwenza abantu baqaphele. Njengoba ukusebenza okuningi ...
UDing, ding, bang, wephule enye, futhi leli elinye lamathuluzi ajwayelekile kakhulu ebhodini lethu, i-glassware. Uyihlanza kanjani i-glasswares nokuthi ungomisa kanjani Kunezinto eziningi okufanele uzinake ngesikhathi sokusebenzisa, uyazi? Ukusetshenziswa kwe-glassware ejwayelekile (I) iPipette 1. Ukuhlukaniswa: Ipayipi lemaki elilodwa ...
Ubhadane lwenoveli i-coronavirus luyaqhubeka nokusabalala, izikhungo eziningi zelabhorethri yezokwelapha ziqala ukusebenzisa i-othomathikhi ye-laboratory washer.
Ubhadane lwezifo olwaqubuka entwasahlobo ka-2020 lusongela impilo yaso sonke isintu. Ukuqhamuka kwenoveli iCoronavirus sekudale izifo ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha emhlabeni jikelele. Bangaphezu kuka-300,000 abantu asebeshonile, futhi ochwepheshe abaningi abanalo ithemba lokuthi ubhadane luzophela maduze ...
Umqondisi Wokuphathwa Kwezokuphathwa Kwemakethe kaMasipala waseHangzhou uLiu Feng uvakashele inkampani yethu futhi ukhathazekile ngokuqala kabusha komkhiqizo ngemuva kwenoveli coronavirus
NgoMashi 16, uMqondisi Wezokuphathwa Kwezokuphathwa Kwemakethe kaMasipala waseHangzhou uLiu Feng weza enkampanini yethu ukuzobona ngokuqala kabusha kwamabhizinisi. Kusukela kwaqhamuka ...